ကျန်းမာရေး – Page2– media sport
ဆေးဖက်ဝင် အမဲရောင် ကြက်သွန်ဖြူ
ဆေးဖက်ဝင် အမဲရောင် ကြက်သွန်ဖြူ အမဲရောင် ကြက်သွန်ဖြူ လေးကို စားဖူးကြပြီလား ??? သာမန်စားနေကြ ကြက်သွန်ဖြူ နဲ့ မတူပဲ တမူကွဲပြားတဲ့ အမဲရောင်ကြက်သွန်ဖြူ လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ တကယ်တော့ အမဲရောင်ကြက်သွန်ဖြူ ဆိုတာက ကြက်သွန်ဖြူ မျိုးကွဲတစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး။ ရိုးရိုးကြက်သွန်ဖြူဥကိုမှ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အပူချိန် ရ၇ ºC မှာ ၁၄ ရက် ကနေ ၄၀ ရက်နေ့ထိထားကာ Fermented ပြုလုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ပြုလုပ်ပြီးနော က်မှာ တော့ ရိုးရိုးကြက်သွန်ဖြူ ဥလေးတွေရဲ့Enzymeက ပြိုကွဲသွားတာကြောင့် ရိုးရိုးကြက်သွန်ဖြူဥတွေရဲ့ အရသာ ပူစပ်စပ်ကနေ ချိုတဲ့အရသာ၊ ဖြူတဲ့ အရောင်ကနေ အမဲရောင် အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားတာပါ။ သာမန်ကြက်သွန်ဖြူထက် Antioxidant ၂
ဆေးဖက်ဝင် ကြက်သွန်ဖြူအစွမ်း နဲ့သိကောင်းစရာများ
ဆေးဖက်ဝင် ကြက်သွန်ဖြူအစွမ်း နဲ့သိကောင်းစရာများ ကြက်သွန်ဖြူကိုဟင်းတွေထဲထည့်ချက်စားတာရှိသလို၊ ဆီချက်ချက်တာ၊ အသုပ်တွေထဲထည့်စားတာနဲ့ဆိုပြီး အမျိုးမျိုးစားကြလေ့ရှိပါ တယ်။ ကြက်သွန်ဖြူက အနံ့ဆိုးပေမဲ့ ဆေးဖက်ဝင်တဲ့ အပိုင်းတွေတော်တော် လေးများပါတယ်။ အနာကျက်စေနိုင်သလို အခြား ဆေးဖက်ဝင်တာတွေကလည်း အများကြီးပါ။ အအေးမိသက်သာစေ ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ကြက်သွန်ဖြူကိုသုံးထားတဲ့ ဆေးနည်းတွေက သာမန်ဖျားနာမှုဝေဒနာတွေကိုသက်သာပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။ ကြက်သွန်ဖြူမှာခန္ဓာကိုယ်ကို ကျန်းမာစေတဲ့ allicin ပါဝင်နေပါတယ်။ အအေးမိချင်ချင်ဖြစ်နေရင် ကြက်သွန်ဖြူစားပေးပါ။ အရိုးတွေကို ကြံ့ခိုင်စေ ကြက်သွန်ဖြူက အရိုးတွေကိုကျန်းမာစေနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သွေးဆုံးပြီးအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ အရိုးပွတာမျိုးမဖြစ်အောင်စားပေးသင့်ပါတယ်။ ကြက်သွန် ဖြူက အက်စထရိုဂျင် ထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးစေနိုင်တာကြောင့် အရိုးတွေကို ကြံ့ခိုင်သန်စွမ်းစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သွေးပေါင်ကျစေသွေးတိုးရောဂါကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်နေကြပါတယ်။ ကြက်သွန်ဖြူမှာပါတဲ့ polysulfides က သွေးကြောတွေကိုကျယ်စေနိုင်ပြီး ကြွက် သားတွေကိုပြေလျော့စေနိုင်တဲ့ အာနိသင်ရှိနေပြီး သွေးမတိုးအောင်ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ သွေးတိုးနေရင် ကြက်သွန်ဖြူစားပေးလို့ရပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ကို လန်းဆန်းတက်ကြွစေ ကြက်သွန်ဖြူက ခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်တာမျိုးမဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ သွေးပေါင်ချိန်ကိုကျစေပြီး နှလုံးခုန်နှုန်းကိုထိန်းညှိပေးပါတယ်။ ကိုယ်
ကျွန်တော့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေထဲမှာ( နှင်းခူ )ပေါက်နေတဲ့သူ ရှိလားတော့ မသိဘူး..နှင်းခူရောဂါနှင့် ငါးခူ
“နှင်းခူရောဂါနှင့် ငါးခူ” ကျွန်တော့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေထဲမှာ( နှင်းခူ )ပေါက်နေတဲ့သူ ရှိလားတော့ မသိဘူး..နှင်းခူရောဂါနှင့် ငါးခူ အကယ်၍ မိမိ၏ အရေပြားပေါ်၌ နှင်းခူ ပေါက်နေရင် လုံးဝ လုံးဝ စိတ်မညစ်ပါနဲ့.. နှင်းခူနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆေးကောင်းတလက်ကို ကျွန်တော် အာမခံပြီး ဖော်ပြပေးပါ့မယ်။ နှင်းခူကို (Eczema)လို့ ခေါ်ပါတယ်။ နှင်းခူရောဂါဟာ အမျိုးအစား(၈)မျိုးခန့် ရှိပါတယ်။ (1)Atopic dermatitis. (2)Contact dermatitis. (3)Dyshidrotic eczema. (4)Hand eczema. (5)Neurodermatitis/Lichen simplex chronicus. (6)Nummular eczema. (7)Seborrheic dermatitis. (8)Stasis dermatitis. ဒီ (၈)မျိုးဟာ နှင်းခူ ဖြစ်တည်လာပုံခြင်း မတူဘူး ခင်ဗျ.. ဥပမာ”အချို့က သွေးကြောင့်ဖြစ်တတ်တယ်၊လက်ပတ်နာရီ၊စတီး၊နီကယ်နှင့်အခြားသော သတ္တုနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ ဖန်စီပစ္စည်းတွေ ဝတ်ဆင်လို့လည်းဖြစ်တတ်တယ်၊
လူတိုင်း အိမ် မှာ ဆေြး ဖစ် ဝါးဖြ စ် ဆောင် ထားသ င့် တဲ့ ဆေး ဖက် ဝင် လောက်ေ သ ရွက်
[Zawgyi]လူတိုင်း အိမ် မှာ ဆေြး ဖစ် ဝါးဖြ စ် ဆောင် ထားသ င့် တဲ့ ဆေး ဖက် ဝင် လောက်ေ သ ရွက် ဒီနေ့ ဆရာမတစ်ယောက်က လောက်သေရွက် ကို ရေနွေးကြမ်းလိုမျိုးကျိုသောက်တာ ချောင်းဆို တကယ်သက်သာသွားတယ်ဆိုလို့ စာဖတ်သူတို့ကို ပြန်ပြီးမျှဝေချင်တာနဲ့ ဆရာမတွေဆီကလည်း နည်းနည်း စပ်စုကြည့်ရင်းအွန်လိုင်းစာမျက်နှာပေါ်ကနေလည်းစာတွေပြန်ရှာဖတ်ကာ အသုံးဝင်မယ်လို့ ထင်တဲ့ ဆေးနည်းတချို့ကို ပြန်ပြီး မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ လောက်သေရွက်ကို စာဖတ်သူတို့အားလုံးသိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ စိုစွတ်တဲ့ဒေသတွေမှာ သဘာဝအလျောက်ပေါက်ရောက်တဲ့ အပင်ဖြစ်ပါတယ်။ လောက်သေရွက်က အရွက်ကော အမြစ်ပါ ဆေးဖက်ဝင်ပါတယ်။ ငပိလုပ်ငန်းတွေမှာလည်း အသုံးပြုကြပါတယ်။ မြန်မာဆေးကျမ်းများအဆိုအရ လောက်သေပင်ဟာ လေ နဲ့ သလိပ်၊ သည်းခြေကို နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရေဂါဖြစ်စေတဲ့ ဘက်တီးရီးယား
သွေးကြောထုံးခြင်းအတွက် ခရမ်းချဉ်သီး ကုသနည်း ဒီရောဂါ ခံစားသူအချို့က တခြားကုထုံး တွေအကြောင်း ဖတ်ဖူးထားတာမျိုး ရှိနိုင်ပေမယ့် ဒီခရမ်းချဉ်သီး ကုသနည်းလေးကိုတော့ သိချင်မှ သိကြပါလိမ့်မယ်။ ခရမ်းချဉ်သီးမှ ရတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေအကြောင်း သိထားကြပေမယ့် သွေးကြောထုံးခြင်းကို ကုသပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတော့ သိရှိသူ အနည်းအကျဉ်း သာရှိပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ခရမ်းချဉ်သီးမှည့်နဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးစိမ်းသုံး နည်း (၂) နည်း တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ခရမ်းချဉ်သီးစိမ်း ကုသနည်း ခရမ်းချဉ်သီးစိမ်း အနည်းငယ်ကို ရေဆေးပြီး အကွင်းလိုက်ဖြစ်အောင် လှီးပါ။ အကွင်းလိုက် လှီးထားတဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးစိမ်းတွေကို သွေးကြောထုံးတဲ့နေရာ တစ်နည်းအားဖြင့် သွေးကြောတွေပေါင်ဆုံရာ နေရာမှာ တင်ပေးရပါမယ်။ ပတ်တီးနဲ့ ပတ်စီးပေးနိုင်ပါတယ်။ အရေပြားပေါ် စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်း ခံစားတဲ့အထိ ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်လာရင် ဖယ်ထုတ် သို့မဟုတ် ကျွမ်းလာသလို ခံစားရသည်အထိ
မျက် မှန် လွတ်ေ စ တဲ့ မျက်ကြည် စားေ ဆး
[Zawgyi]မျက် မှန် လွတ်ေ စ တဲ့ မျက်ကြည် စားေ ဆး အသက်(၃၀)ကျော်မှပဲ မျက်စိမကြည်။ မှုန်ဝါးဝါးမို့ ဆရာဝန်ပြကြည့်တော့ အနီးကြည့် ပါဝါ (+၁၅၀)ဒီဂရီ မျက်မှန်တပ်ခဲ့ရသည်။ အခုအသက်(၄၀)ကျော်မှ မျက်မှန်လွတ်လေတော့ ထူးဆန်းနေသလို အများက ထင်ကြတော့သည်။ ဆေးနည်း အချိုးအစားအတိုင်း လွယ်ကူစွာ ဖေါ်စပ်ရန် ဖြစ်လေသည်။ ဆေးနည်း (၁) ဆီးဖြူးသီးကို ထုထောင်းပြီး အစေ့ဖယ်၊ နေလှန်း၊ အမှုန့်ပြုလုပ်ရန်။ (၂) ကြိတ်မှန်ရွက်ကိုခူး အရိပ်မှာ အလိုအလျောက် သဘာဝအတိုင်း အခြောက်ခံ အမှုန့်ပြုရန်။ (၃) ကွမ်းရွက်ကို အခြောက်လှန်း အမှုန့်ပြုရန်။ (၄) ပျားရည်စစ်စစ် ထို(၄)မျိုးသာ လိုပါသည်။ ယခုခေတ်ကာလ မျက်မှန်ကောင်းတစ်လက်လုပ်ပါမူ ကာလတန်ဖိုး လေးသောင်းငါးသောင်းမက ကုန်သည်သာ။ နေရာတကာ မျက်မှန်မပါတော့
သွေး တိုး တဲ့ အချိန် မြန်မြန် ကျေ အာင် လုပ် နို င် တဲ့ အလွယ် နည်း လမ်း များ
သွေး တိုး တဲ့ အချိန် မြန်မြန် ကျေ အာင် လုပ် နို င် တဲ့ အလွယ် နည်း လမ်း များ ===================== ရုတ်တရက် သွေးတိုးနေတဲ့အခါမျိုးမှာ ခေါင်းမူးခြင်း ၊မျက်နှာအစ်မို့ခြင်း ၊ ဇက်ကြောထိုးခြင်း များ ခံစားရပါတယ် ။ သွေးပေါင်ချိန် အများကြီးတက်နေတာဟာ အသက်အန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့အထိကို အန္တရာယ်ရှိပါတယ် ။ ဒီလို မိမိကိုယ်ကို သွေးတိုးသည်ဟု သိသည်နှင့် တပြိုင်နက် ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်အောင် လုပ်ဖို့ လိုပါတယ် ။ အဲ့ဒိအတွက် ဆေးသောက်စရာမလိုဘဲ ကိုယ့်ရဲ့ အိမ်​မှာရှိတဲ့ မီးဖိုချောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ပြုလုပ်လို့ရပါတယ် ။ ၁။ သံပုယိုသီး (သို့) သံပုရာသီး သံပုယိုသီး (သို့) သံပုရာသီးကို အရည်ညှစ်ပြီး ရေဖြင့်ဖျော်သောက်ပါ။
10နှစ်ဆေးလိပ်သောက်ထားတာကြောင့် မည်းညစ်နေတဲ့အဆုတ်ကို 7ရက်အတွင်း ပြန်လည်သန့်စင်ပေးနိုင်သော ရှောက်ချိုသီးယိုရေနွေးကြမ်း စီးကရက်အတွင်းမှာပါဝင်တဲ့ နီကိုတင်းဓာတ်ပစ္စည်းဟာ စိတ်ဖိစီးမှုများကို ပြေပျောက်စေခြင်း၊ စိတ်ရွှင်လန်းတက်ကြွစေခြင်း နှင့် စိတ်ခံစားချက်ကိုသက်သောင့် သက်သာဖြစ်စေခြင်း စ သည်တို့ကြောင့် သင့်ကို တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ စွဲလန်းလာစေ မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ နီကိုတင်းဓာတ်က အဆိပ်ပျော့တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး စွဲလန်းလာပြီဆိုရင်ဖြင့် ဖြတ်ရခက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း မျက်မှောက်ကာလမှာ ဆေးလိပ်သောက်သုံးသူ တစ်စတစ်စများလာပြီး ဆေးလိပ်ကြောင့် ရောဂါရသူများ မှာလည်း တစ်စထက်တစ်စများပြားလာနေပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်သူအတော်များများက ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်သောက်တာ အခြားသူတွေကို ဂရုစိုက်စရာမလိုဘူးလို့လည်းတွေးတတ်ကြပါတယ်။ တစ်ကယ်တော့ ဒီအတွေးအခေါ်က မှားတယ်လို့ဆိုပါရစေ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သုတေသန စစ်တမ်းများအရ ဆေးလိပ်သောက်သုံးသူ ၃ဒသမ၄ဦးကြောင့် ဆေးလိပ်မသောက်သုံးသူ ၇ဒသမ ၄ဦးကို ရောဂါဖြစ်စေရန် အကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိနေတယ် လို့သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိသားစုတစ်ခုမှာ ဆေးလိပ်သောက်သုံးသူ ၁ဦးရှိပါက အခြား ၃ဦး၏
ဆေး ဆိုး စ ရာ မ လို ဘဲ ဆံပင်ဖြူေ တွ အမည်းေ ရာင်ပြန်ဖြစ်ေ စ မယ့် အံ့သြ ဖွယ် နည်း လမ်း ဆံပင်ကျွတ် သူ များ၊ ထိပ်ပြော င်သူ များ၊ မျက်မှန် တပ်သူများသို့
[Zawgyi] ဆေး ဆိုး စ ရာ မ လို ဘဲ ဆံပင်ဖြူေ တွ အမည်းေ ရာင်ပြန်ဖြစ်ေ စ မယ့် အံ့သြ ဖွယ် နည်း လမ်း ဆံပင်ကျွတ် သူ များ၊ ထိပ်ပြော င်သူ များ၊ မျက်မှန် တပ်သူများသို့ ”ဆေးဆိုးစရာမလိုဘဲ ဆံပင်ဖြူတွေ အမည်းရောင်ပြန်ဖြစ်စေမယ့် အံ့သြဖွယ် နည်းလမ်း” တချို့တွေက သွေးသားကြောင့် ဆံပင်ဖြူရမယ့် အရွယ်မတိုင်ခင် ဆံပင်တွေ ဖြူလေ့ရှိပါတယ်။ တချို့ကတော့ အသက်အရွယ်အရ ဆံပင်ဖြူလာကြပါတယ်။ ဆံပင်အားလုံးဖြူသွားတာမျိုးလည်း မဟုတ်သေးဘဲ ကျိုးတို့ကျဲတဲ နေရာကွက်ကြား ဖြူတယ်ဆိုရင်တော့ ကြည့်ရဆိုးပါတယ်။ ဒါကို အမည်းရောင်ဆေးမဆိုးဘဲ သဘာဝအတိုင်း ပြန်မည်းအောင် ပြုလုပ်လို့ရတဲ့သဘာဝနည်းလမ်းလေးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဆေးနည်း အာလူးငါးလုံးကို ရေစင်အောင်ဆေးပါ။
ဆေး ဆိုး စ ရာ မ လို ဘဲ ဆံပင်ဖြူေ တွ အမည်းေ ရာင်ပြန်ဖြစ်ေ စ မယ့် အံ့သြ ဖွယ် နည်း လမ်း ဆံပင်ကျွတ် သူ များ၊ ထိပ်ပြော င်သူ များ၊ မျက်မှန် တပ်သူများသို့ 
[Zawgyi]​ဆေး ဆိုး စ ရာ မ လို ဘဲ ဆံပင်ဖြူေ တွ အမည်းေ ရာင်ပြန်ဖြစ်ေ စ မယ့် အံ့သြ ဖွယ် နည်း လမ်း ဆံပင်ကျွတ် သူ များ၊ ထိပ်ပြော င်သူ များ၊ မျက်မှန် တပ်သူများသို့”​ဆေးဆိုးစရာမလိုဘဲ ဆံပင်ဖြူတွေ အမည်းရောင်ပြန်ဖြစ်စေမယ့် အံ့သြဖွယ် နည်းလမ်း” တချို့တွေက သွေးသားကြောင့် ဆံပင်ဖြူရမယ့် အရွယ်မတိုင်ခင် ဆံပင်တွေ ဖြူလေ့ရှိပါတယ်။ တချို့ကတော့ အသက်အရွယ်အရ ဆံပင်ဖြူလာကြပါတယ်။ ဆံပင်အားလုံးဖြူသွားတာမျိုးလည်း မဟုတ်သေးဘဲ ကျိုးတို့ကျဲတဲ နေရာကွက်ကြား ဖြူတယ်ဆိုရင်တော့ ကြည့်ရဆိုးပါတယ်။ ဒါကို အမည်းရောင်ဆေးမဆိုးဘဲ သဘာဝအတိုင်း ပြန်မည်းအောင် ပြုလုပ်လို့ရတဲ့သဘာဝနည်းလမ်းလေးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဆေးနည်း အာလူးငါးလုံးကို ရေစင်အောင်ဆေးပါ။